Sweety Home Company launches Viber sticker pack to welcome the Thadingyut festival of Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
Date: October 8, 2018Author: Rahul0Comments
“Viber Users Can Start Sharing Fun & Cute Thandingyut Stickers to Celebrate the Lighting Festival with Friends, Family and Loved ones”
Yangon – October 8, 2018 – Sweety Home Company, one of the leading furniture manufacturing and distributing companies in Myanmar, today released its first localised Myanmar Viber sticker pack for celebrating the most important Thadingyut Festival, also known as the Lighting Festival of Myanmar.
As of October 8 on the evening, the specially created Myanmar sticker pack is available for free download and includes (24) distinctive stickers celebrating everything about the Thadingyut festival and wedding season of Myanmar.
Throughout the festival period, Myanmar users can send stickers with greetings of prosperity and good wishes as well as entertaining stickers about the festivities. Invite your friends to go out in the street funfair, and pay respect to elder people who’re away from home town during the festival period and sendacute Myanmar wedding couple sticker to your loved ones.
Each sticker reflects key celebrations and traditions observed by Myanmar people during the festival period as well as trendy Myanmar slang words that are popular among young people in Myanmar.
“As people in Myanmar start celebrating Thadingyut Festival, we are delighted to join the vibe with the release of Sweety Home’s first Myanmar sticker pack created especially for the Thadingyut festival season,” said Daw Khin Thida Nwe, Senior Director from Sweety Home Company Limited.
“Sweety Home Thadingyut sticker pack is absolutely free to download from Viber Sticker Market. We hope that users in Myanmar will enjoy sharing these fun and inspirational stickers with friends, family and loved ones,” she said.
The Sweety Home Thadingyut sticker pack is now available to download from the Viber sticker market for free. This release marks asanew sticker inaseries of Myanmar sticker packs to be announced in the coming months.
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည့် Sweety Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကို ကြိုဆိုရန် ချစ်စဖွယ် မြန်မာ Viber စတစ်ကာများ မိတ်ဆက်ပေး
“Viber အသုံးပြုသူများ ချစ်စဖွယ် သီတင်းကျွတ် အထူးစတစ်ကာများကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းနှင့် ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများထံသို့ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့ မှ စတင်ကာ ပေးပို့အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။”
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းပရိဘောဂထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည့် Sweety Homeကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်း ပွဲတော်ကိုကြိုဆိုရန် မြန်မာဘာသာဖြင့် အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော ချစ်စဖွယ်သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ဖော်ကြူးသည့် Viber စတစ်ကာများကို မိတ်ဆက်လိုက်ရာ မြန်မာViberသုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်ပြီး Viber Sticker Market တွင် အခမဲ့ Download ရယူကာ သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာသီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်အား အထူးဖော်ကြူးကာ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့် ယင်း စတစ်ကာများတွင် ပွဲတော်အား ထင်ဟက်စေမည့် စတစ်ကာများ၊ ဝါကျွတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်တော့မည့် ချစ်စဖွယ် မင်္ဂလာမောင်နှံ စသဖြင့်ချစ်စဖွယ်ဟန်ပန်၊ အမူအယာများဖြင့် ဖန်းတီးထားသော စတစ်ကာ ပေါင်း(၂၄)ခု ကို သုံးစွဲသူများအကြိုက်တွေ့ စေရန် ဖန်တီးထည့်သွင်းထားပါသည်။
အချို့သောစတစ်ကာများကို သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကာလအတွင်း မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအလေ့အထ၊ အထင်ကရ အကြောင်းအရာများကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသကဲ့သို့ ခေတ်လူငယ်များ အကြိုက် ရေပန်းစားသော ဗန်းစကားအချို့ကိုပါ စတစ်ကာများအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ထို့အပြင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကာလတွင်းသာမက နေ့စဉ်ဘဝတွင်ပါအသုံးဝင်သော စတစ်ကာများ ပါဝင်သည့် Sweety Home Viber စတစ်ကာများကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းရာတွင် လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စနောက်ရာတွင်လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ပေးပို့၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အမှတ်တရ နေ့ရက်လေးများကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
“သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အချိန်အခါဆိုတာ ဘာသာရေးပွဲတော်ကာလဖြစ်သလို ဝါကျွတ်ပြီဆို မင်္ဂလာ ဆောင်ရာသီအချိန်အခါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ Sweety Home ကုမ္ပဏီကနေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Viberစတစ်ကာလေးတွေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်ရခင်ရသူတွေ သာမက မိသားစုဝင်တွေဆီ ပါပို့လို့ရမယ့် မြန်မာစတစ်ကာ သန့်သန့်လေးတစ်ခုကို Viber သုံးစွဲသူတွေအတွက် ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီကနေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြှောက်ရပါတယ်။”ဟု Sweety Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အကြီးတန်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်သီတာနွယ်က ပြောသည်။
မိမိတို့၏ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများမှ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးများကို “FAတွေ အားကျစမ်းကွာ”ဟု စနောက်နိုင်သလို၊ သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်ကာလအတွင်း အဝေးရောက် လူကြီးတွေကို ထိုင်ကန်တော့ တာကို ရည်ရွယ်သည့် စတစ်ကာလေးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ် သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်ဈေးလျှောက်တာကို ရည်ရွယ်သည့်စတစ်ကာ၊ ညဘက် မွှေ့ယာပေါ်ကနေ အိပ်ယာဝင် နှုတ်ဆက် စကားကိုရည်ရွယ်သည့် စတစ်ကာ စသည်ဖြင့် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ပြောဆိုသုံးစွဲနေသည့် အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းပြီး Viber သုံးစွဲနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သား များအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး Sweety Home ကုမ္ပဏီ မိသားစုမှ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော် အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျန်မတို့ ရဲ့ Sweety Home သီတင်းကျွတ် စတစ်ကာလေးတွေက အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပဲ Viber Sticker Market ကနေ အခမဲ့ Download လုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်ရသူတွေ နဲ့ မိသားစုဝင် တွေကိုပို့ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်လေးကို ဖန်တီးလိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။”ဟု သူမက ဆက်ပြော သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်သံစာပို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Viberတွင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖန်တီးထားသော စတစ်ကာအတွဲများအနက် ယခု Sweety Home ကုမ္ပဏီ၏ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် စတစ်ကာမှာ အသစ်စက်စက် ထွက်ပေါ်လာသည့် ချစ်စဖွယ် မြန်မာ စတစ်ကာပင် ဖြစ်သည်။
Sweety Home ကုမ္ပဏီအကြောင်း
FurnitureLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsSweety HomeSweety Home Company LimitedTeam LycaThadingyut FestivalViberViber Sticker PackYangon
Previous Previous post: Nestlé rebrands Lactogen3as Lactogrow3withanew premium look
Next Next post: Suzuki unveils first time locally produced all new Swift in Myanmar today